Na-atụ aro Nhọrọ maka GOM Player for Mac
> Resource> iPhone> GOM Player N'ihi Mac
c Nụrụ GOM ọkpụkpọ nke ndusụk ini ma ọ bụ adịghị gị Mac? Ọ bụ ezigbo mwute na-eche na ihe mere na ụwa ga na mmepe chọrọ igbochi ha ọrụ na-nanị otu n'elu ikpo okwu nke sistemụ? Ọ gaghị adị nnọọ mfe maka njedebe ọrụ na-enwe ike iji kpọmkwem otu mpempe software na ma otu usoro nke ha mmasị? O doro anya na, anyị na-niile na-achọ na ya si dị iche iche anya. Ọ bụ azụmahịa ụwa ebe ihe niile bụ ihe niile banyere iwu na-ahịa òkè. Ọfọn, na ihe mere anyị na-na na na-agbalị kasị mma anyị chepụta ihe ị nwere ike iji dị ọzọ ka GOM ọkpụkpọ na N'ezie ọ bụ maka Mac ebe Ohere si ọma kpuchie.
Alternative 1: VLC Media Player for Mac
Alternative 2: Wondershare Player maka Mac
Iche n'etiti Alternatives
VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ anọwo na n'ihi na ihe karịrị 10 afọ, akpa malitere dị ka ihe agụmakwụkwọ oru ngo ma mgbe e mesịrị mere dị ka ọha n'okpuru GNU General Public License. Nke mbụ version nke ọkpụkpọ e eze tọhapụrụ ruo mgbe 2009 na ọ bụ downloadable on ọtụtụ ndị nyiwe dị ka Windows, Mac OS X, Linux na wdg N'agbanyeghị na Mac version-atụle ga-ihe na-adịbeghị anya ntọhapụ, ndị na- na mbụ ji ya na Windows ga-achọta ya nnọọ maara.
Ruru myirịta na okwu nke atụmatụ, VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ ga-eleghị anya n'elu gị ndepụta dị ka ọzọ GOM ọkpụkpọ maka Mac. N'ụzọ dị mwute, ị ga-atụ uche gị na-agbanwe agbanwe skins dị ka ọ bụ naanị na-arụ ọrụ na Windows na ndị ọzọ na nyiwe ma ọ bụghị n'ihi Mac OS X! Ọ bụrụ na ị chọrọ nkọwa ndị ọzọ na ya atụmatụ, Nanị na-eso njikọ HERE.
Na-esote atụ aro ọzọ GOM ọkpụkpọ maka gị Mac ga-Wondershare Player. Otu ugboro ọzọ, ị na-nyere nhọrọ ibudata ya jidesie ọzọ na-abụghị Mac sistemụ bụrụ na ị chọrọ; na nke a na Windows. Ọ na-abụghị nanị ndị nanị Mac OS. Lee ahụ efe ọ bụghị ya? Ị nwere ike dịkarịa ala ikwu na ọ ka ndị enyi na-adịghị eji a Mac bụrụ na ị n'ezie na-amasị ya.
Dị ka e gosiri n'okpuru, mgbe edinam buttons na-mara mma nke ukwuu mere inweta ma ọ bụ ẹkenịm ka onye ọrụ mma. Ị nwere ike mfe playback, kwụsịtụ, kwụsị, ngwa ngwa na-atụ, na-a snap ogbugba, mụbaa ya ka ihuenyo zuru size na ọtụtụ ndị ọzọ na menu mmanya na ala nke interface.
Tụnyere VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ, ị nwere ike na-atụ anya Wondershare ọkpụkpọ inwe ike ẹkedori ma ọ bụ malite ya ngwa ngwa ngwa. Na n'elu nke ahụ, ị ​​pụrụ ijide n'aka na playback nke gị faịlụ na-eme na a smoother n'ụzọ na a ọzọ otu ebe arụmọrụ. Na, m na-ekwu na-erughị mkpọka ma ọ bụ PC ịlụ kwuba ọkara ụzọ site na-akpali akpali idaha. Nke ahụ bụ ihe ikpeazụ ị chọọ mere. E nwekwara a mma nkwado maka HD videos na ọ ga na-elu-erughị CPU ebe nchekwa ojiji. E wezụga nke ahụ, ị ​​ga-abịa na-achọpụta na imewe na interface bụ Cleaner na n'ụzọ kwụ ọtọ, n'ihi ya ala isi nri nke fọrọ nke nta ọ bụla ụdị ọrụ, yana idobe okirikiri nke beginners.
Na downside Otú ọ dị, ụfọdụ nke mgbe edinam buttons nwere ike ghara ịbụ dị ka vasatail tụnyere ndị VLC media ọkpụkpọ. I nwere ike na-enweta glitch mgbe na-abịa na-achọ-atụ a akpan akpan idaha. Ma, ka, ihe bụ nsogbu abụghị a nnọọ o otu gwụla ma ị bụ otu n'ime ndị na-ekiri ndị agbasaghị nwere àgwà nke na-achọ ụzọ niile site na. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, Alternative 1 ga-a mma kwesịrị ekwesị. The ndị ọzọ na atụmatụ na Wondershare ọkpụkpọ bụghị mgbe par na VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ ga-ndepụta okwu. Ọ bụ obere siri ike ma na mma ọkọnọ na VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ m nwere ikwu.
E ị na-aga, nke ahụ bụ m na-ele nke abụọ ọzọ na i nwere ike eleghị anya nwalee dị ka gị GOM ọkpụkpọ maka Mac. Echefukwala ka m mara otú o na-aga mgbe ọnwụnwa bịaara gị!
Esi ozi ederede ndia si iOS / gam akporo igwe